Caafimaadka, Badbaadada & Deegaanka - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Dhaqanka ganacsiga ee mas'uulka ah iyo kobaca dhaqaale ee joogtada ah ayaa qayb ka ahaa DNA-da tan iyo markii la helay Tower XY.
Maanta horumar waara iyo dhaqaale waa mabaadi'dayada kuwaas oo ah qayb muhiim ah oo ka mid ah himiladeena iyo adeegeena waxaana lagu qaabeeyay shaqadayada habaysan.Waxaan aaminsanahay in dheellitir ku habboon lagu gaari karo horumarka dhaqaalaha iyo yoolalka deegaanka.Bartilmaameedyada iyo ujeedooyinka deegaanka ayaa loo dejiyay ganacsiyadayada kuwaas oo lagu hubiyo maaraynta joogtada ah iyo waxqabadka kormeerka oo ay weheliso ilaalin madax banaan gudaha iyo qolo saddexaad.XY Tower waxay aaminsan tahay oo kor u qaaddaa in dhammaan shaqaalaheennu ay mas'uul ka yihiin u hoggaansanaanta bartilmaameedyada, ujeedooyinka iyo shuruudaha maamulka.Waxaan u heellannahay inaan noqono hoggaamiye mas'uul ka ah maamulka HSE ee shirkadaha asaagga ah.
Tower XY waxaa u heellan fikradda ah in dhammaan shilalka laga hortagi karo waxaana naga go'an siyaasad-shilal eber ah.Si loo gaaro ballan-qaadkan oo loo kobciyo dhaqanka horumarinta joogtada ah ee badbaadadayada amniga iyo waajibaadka deegaanka, shuruudaha soo socda waa in la raaco:
Inaga oo ilaalinayna oo u hoggaansanno dhammaan Shuruucda iyo xeerarka hadda jira iyo kuwa mustaqbalka.
Ka codso jaangooyooyin iyo nidaamyo adag oo dheeraad ah shirkadeena.
Caafimaadka shaqaaluhu waa welwelka mudnaanta leh ee shirkadda.Tower XY waxay hubinaysaa badbaadada goobaha shaqada dhammaan shaqaaluhuna waa inay ku jiraan qalabka ilaalinta goobta shaqada, halka shaqaaluhuna uu si adag u raaco xeerka wax-soo-saarka badbaadada.
Ilaalinta deegaanka adiga oo ilaalinaya heerarka hoose ee qashinka la soo saaray iyada oo loo marayo hawlo kala duwan, lana yareeyo isticmaalka kheyraadka.
Si joogto ah u cadee meelaha suurtagalka ah ee horumarinta Nidaamka Maareynta HSE oo deji tillaabooyinka lagama maarmaanka u ah si loo hirgeliyo horumarradan.